ရည်းစား | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on August 26, 2008
Posted in: ဟာသများ.	3 Comments
လူကြားထဲမှာ အကြွေးလိုက်မတောင်းပါနဲ့နော် ။
နင့်မျက်နှာက ၀က်ခြံတွေကို ငါချစ်ပါတယ်
နင့်ခြေသလုံးက ၀ဲခြောက်တွေကို ငါချစ်ပါတယ်
နင့်ရဲ့ မတရားခေါထွက်နေတဲ့ သွားနှစ်ချောင်းကိုလည်း
အားလုံးကို ငါသိတယ်ကောင်မလေး ….
နင့်ဆွဲကြိုးလေးက လှလိုက်တာ (အဟေ..ဟေ့..တူနယ်..ဗြောင်) ။ ။
3 comments on “ရည်းစား”
Anonymous on July 2, 2012 at 5:07 pm said:
စုစု on December 24, 2008 at 1:21 am said:
လုပ်ထားဟ မောင်ဥက္ကာရ….. နင်ကတော့ ရေးလိုက်ရင် အဲလိုကြီးပဲ….
humbarger on October 17, 2008 at 6:58 am said: